Budata Ace Stream maka Windows
Budata Ace Stream
Free Budata maka Windows (63.44 MB)
Budata Ace Stream,
Ace Stream bụ usoro mgbasa ozi ọgbọ ọhụrụ nke gụnyere ngwaahịa dị iche iche na azịza maka ma ndị ọrụ ịntanetị nkịtị na ndị otu ọkachamara nke ụwa mgbasa ozi. Ihe kacha adọrọ mmasị nke ikpo okwu a bụ na ọ na-enye gị ohere ịnweta ọdịnaya dị mma nke ị na-ahụtụbeghị mbụ.
Ewubere Ace Stream na teknụzụ P2P na ụkpụrụ BitTorrent. Dị ka ị maara, a na-egosi protocol a dị ka ngwọta kachasị dị irè a ga-eji mgbe ị na-ebufe faịlụ ndị dị elu. Ihe omume a, nke na-enye ohere ịnyefe data na netwọkụ, dabere na ntọala ndị a pụrụ ịdabere na ya nke ukwuu na ọ dịghị akpata nsogbu ọ bụla noge eji.
Igwe okwu Ace Stream na-enye ọmarịcha ọdịyo / vidiyo maka mgbasa ozi na ihe ngosi nịntanetị. Tụkwasị na nke a, a na-ewere ya dị ka otu nime ngwọta kachasị mma maka ịchekwa faịlụ ọdịyo na vidiyo. Iji chịkọta ya nke ọma, ndị ọrụ Ace Stream nwere ike ilele vidiyo ọ bụla ruo ugboro iri doro anya karịa vidiyo mkpebi kacha elu na YouTube (1080p).
Usoro ihe omume nwekwara tinye-ons mepụtara maka ojiji na Google Chrome na Firefox nchọgharị. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi zuru oke iji kpọọ ọdịnaya visual na ọdịyo, Ace Stream so na mmemme ị kwesịrị ịnwale.
Ace Stream Ụdịdị
Nha faịlụ: 63.44 MB
Mmepụta: Torrent Stream